FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY OMBY KAOKAZY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika mpiandry omby Kaokazy
'Ity ny alikako antsoina hoe Demon amin'ny taona 2. Alika mpiandry Kaokazianina mpiandry firenena marolafy izy. Misy ny anaram-boninahitra: Tompondaka Nasionaly Russia, Tompondakan'ny RKF ary Tompondaka Nasionalin'ny Litoania. Mipetraka ao amin'ny Petlove Kennels, tanàna Jos, fanjakan'ny Plateau, Nizeria izy. Tompony: Dr Olomu Segun Afolabi. Demon dia olona goavambe malefaka, matanjaka be ary manana toetra mahay mandanjalanja. '
Alika Khobun Armenianina
Alika mpiandry omby azerbaijan
Alika Kars (Kaokazy)
Alika Ondry Circassian
Rosiana Kaokazy Ovtcharka
Ilay mpiandry Kaokazy dia manana maso maizimaizina sy matevina. Ny sofina dia rakotry ny volo ho an'ny insulation. Atsangana kely ny valahany avy eo amin'ny tsipika lamosina. Ny rambony dia rakotra volo lava volo mavesatra. Ny lava-tongony dia lava sy mahitsy ary matevina. Ny paws dia lehibe sy mavesatra, misy volo eo anelanelan'ny rantsantongony, manome insulate sy fiarovana tsara. Mainty ny orona ary misokatra tsara ny vavorony. Ny palitao matevina, matevina ary tsy mahazaka toetrandro dia manana volom-borona be dia be ary mandaitra indrindra amin'ny fitazonana ny hatsiaka. Palitao puppy dia palitao tsara kokoa avy eo rehefa olon-dehibe. Ny lokony dia tsy mitovy amin'ny volondavenona, volondavenona, volon-koditra, volomaso ary fotsy. Ny FCI dia mandrara ny alika volontany. Any amin'ny firenena nahaterahany dia fohy ny sofin'ny Kaokaziana Ovtcharka.
Ny tanjon'ny mpiandry Kaokazy tany am-boalohany dia ny fiarovana ny biby fiompy. Ny Ovtcharka Kaokazy mahazatra dia masiaka, be herim-po ary be herim-po. Raha tsy hoe mifanerasera sy miofana tsara dia mety hampiseho fironana masiaka sy tsy voafehy ny Mpiandry Kaokazy. Tena be herim-po, mailo, mahery ary mafy. Tsy manaiky olona tsy fantany izy io ary manana faniriana mahery hiaro azy. Ny zava-drehetra sy izay rehetra an'ny fianakaviana, ao anatin'izany ny ankizy, saka, alika hafa, sns., Dia horaisin'ity alika ity ho anisan'ny 'fianakaviany' ary hajaina sy harovana. Ity alika ity dia tsy tokony havela irery miaraka amin'ny ankizy, satria raha lasa milay loatra ny filalaovana dia mety hahatsapa ny filàna miaro ny zanakao ny Caucasian Ovtcharka ary mety hanao izany betsaka. Tsy manam-potoana ho an'ny olon-tsy fantatra izy io, fa kosa hiarahaba an'ireo sakaiza akaiky. Mety hanjakazaka amin'ny alika hafa tsy fantany izy io. Ny mpiompy alemanina sasany dia mampiasa ny alika ho mpiambina sy mpamono loha laharana. Tsy alika ho an'ny rehetra izany. Mila tompona mahay maneho fahaiza-mitarika matanjaka ary vonona handany fotoana be dia be amin'ny fiaraha-miasa sy fiofanana. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Hahavony: 25 - 28 santimetatra (64 - 72 cm)
Lanja: 99 - 154 pounds (45 - 70 kg)
Ny mpiandry Kaokazy dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mila toerana izy ireo ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Satria miaro azy tsara ny palitaony matevina, dia afaka miatrika am-pifaliana ny fiainana any ivelany izy io, raha manana fialofana mety.
Ity karazana alika ity dia mifanentana indrindra amin'ny fianakaviana misy toerana malalaka manodidina ny trano ahafahany mandositra an-kalalahana amina faritra malalaka. Rehefa tsy miasa mpiambina biby fiompy dia tokony horaisina ho a mandeha isan'andro, mandeha lavitra izay amboarina ny alika. Tsy tokony havela handeha hivoaka eo alohan'ilay mitazona ny fitarihana izy io, satria ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia mila olombelona.
Ankizy 5 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
Misy karazany roa ny palitao: fohy sy lava. Ny palitao an'ny karazana lava volo dia mitaky fikosehana matetika, amin'ny fijerena manokana ireo toerana mety hitrangan'ny korontana. Ny karazana shorthaired dia mila fikolokoloana kely kokoa, fa mbola tokony hosokafana sy kosehina.
Ny mpiandry Kaokaziana dia mpiambina andiany namboarina hatramin'ny taloha molosser karazana any Kaokazy avy amin'ny mpiandry omby eo an-toerana. Ny Kaukasia dia ampiasaina hiarovana ny ondry amin'ny biby mpiremby sy mpangalatra. Ireo alika ireo dia misarika ny sain'ny olona foana noho ny toetra miasa miavaka sy ny fisehoana manaitra. Ny tsy fahampian'ny klioban'ny trano fiambenana voajanahary sy ny fenitra an-tsoratra dia manazava ny antony mahatonga ny Caucasian Ovtcharka miovaova isan-karazany amin'ny firenena sy ny isan-toerana. Nandritra ny taonjato maro dia efa nisy andian'ondry tany Caucasia, ilay faritra be tendrombohitra eo anelanelan'ny ranomasina Mainty sy Caspian ary i Torkia sy Iran mpifanila vodirindrina aminy. Ny alika mitovy amin'io mpiambina tena tsara io dia niaro ireo ondry ireo tamin'ny biby mpiremby sy ny biby nandritra ny 600 taona farafahakeliny. Ny mpiandry Kaokazy dia malaza any Russia. 'Ovtcharka' dia midika hoe 'mpiandry ondry' amin'ny teny rosiana. Any Russia sy faritra hafa amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, dia aseho matetika amin'ny fampisehoana alika io. Any Hongria, Polonina ary Repoblika Czech sy Slovak, fandaharam-piterahana be dia be no miantoka ny fijanonany ho alika malaza, na dia mihena aza ny fampiasana azy ho mpiambina ondry. Ny Caucasian Ovtcharka dia tonga tany Alemana Atsinanana tamin'ny faran'ny taona 1960 mba ho alika mpiambina sisin-tany, indrindra ny rindrin'ny Berlin. Tamin'ny 1989, rehefa nidina ny rindrina, niparitaka ireo andiana alika mpiambina 7000 mahery. Ny ankamaroan'ireny alika ireny dia nomena trano vaovao misy fianakaviana manerana an'i Alemana. Ny fiompiana am-pitandremana any Alemana dia miaro ny hoavin'ity alika mitandrina sy mahaleo tena ity. Azo inoana fa rehefa mihabe ny lazany, dia hamorona safidim-piarovana mahery vaika ny mpiompy.
Mpiambina mpiambina, miasa ny AKC
Vastelin ilay mpiompy Kaokazy amin'ny faha-2 taonany— 'Ity ny alikako lahy antsoina hoe' Vastelin ', Sheepdog Kaokazianina madio avy amin'ny razazalahy tompon-daka malaza sy malaza eran-tany any Russia. Nahazo solontena tsara indrindra tamin'ny fiadiana ny alika tao Moskoa izy. Vasil, araka ny iantsoana azy matetika, dia goavambe malefaka sy be fiaraha-monina rehefa any ivelany, na, ivelan'ny fiambenana. Ankafiziny ny mitaingina fiara, mandeha an-tongotra lavitra, maka sary na dia miaraka amin'ny olon-tsy fantatra aza, ary misarika ny sain'ny olona eny amin'ny toeram-bahoaka. Mifanohitra amin'izany kosa, i Vasil dia alika mpiambina mahatoky sy masiaka indrindra rehefa miaro ny faritra misy azy sy ny fianakaviany. Vasil dia any Nizeria, ao amin'ny toerana anazako 'PetLoveKennels'. Hiditra am-piterahana prorammes miaraka amin'ireo vehivavy tsara indrindra avy any Russia koa izy. Nifanaraka haingana sy tena tsara izy rehefa tonga tany Nizeria. Naka sary tany amin'ny tanàna akaikin'ny Mosko aho fony izy 2 taona. '
'Ity no zanak'osy mpiandry ondry Kaukasia malalako antsoina hoe Genghis aseho eto amin'ny 4 volana. Tiany ny mandany fotoana amin'ireo zanakay any Accra, Ghana. '
'Alika kely mpiandry Kaokazy roa volana 3 volana antsoina hoe Kane sy Abela. Tian'izy ireo ny milalao any ivelany. Mipetraka any Accra, Ghana izahay. '
'Miaraka amin'ireo mpiandry ondry Kaokazianina 2 amin'ny fampisehoana alika any Accra, Ghana.'
Mpiandry Kaokazy olon-dehibe milanja 92 kg (mpiompy T.A Yagodikna, Rosia), sary natolotry ny Petlove Kennels
Kamaz zanak'ondry mpiandry Kaokazy lahy 3 volana— 'Zanakalahin'i Atac lefitra tompon-daka eran-tany 2006, tompondakan'i Eropa 2006, Tompondakan'i Grand Russia, tompondakan'i Failandy, Polonina, Bulgaria, Moldovia, sns mpiompy Tatiana A. Yagodikna (Russia)' sary natolotry ny Petlove Kennels
Kamaz zanak'osy mpiandry Kaokazy lahy 3 volana, sary natolotry ny Petlove Kennels
Michael ilay lehilahy Kaukasia Rosiana tamin'ny 1 1/2 taona nonina tany India— 'Michael dia alika ara-tsosialy, be fiahiana ary milamina, nefa tena miaro. Ny toeram-pambolainay dia tsy mila fitaovana fiarovana na mpiasa hafa. Ny Kaukasia lahy sy vavy anay dia ampy hiambina azy rehetra. '
Caucasian Legend Anchara dia niteraka an'i Yelena Levitina avy amin'ny Kaokazy Legen tamin'ny 2 1/2 taona nilanja 120-125 lbs. Tian'i BabsT izy ary tompony. Anchara dia mpiaro tsy an-drariny, tsy mivadika, milamina, tsy matahotra, olona tsara tarehy ao amin'ny fianakaviako.
Alika mpiandry omby Kaokazy fotsy fotsy amin'ny taona 2— 'Bee dia milamina tokoa nefa alika mpiambina tena miasa. Izy irery ihany no mandrakotra 5 hektara ny tanimbolinay tontolo andro amin'ny mora. Malemy fanahy be izy nefa mankahala ny mpandika lalàna, alika lavorary. Tianay i Bee. '
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ilay Dog Dog Shepherd Kaokazy
Sary alika mpiandry ondry Kaokazy 1
Sary alika mpiandry ondry 2
Sary alika mpiandry ondry Kaokazy 3
frich mainty sy fotsy
mixer spaniel springer volamena
bruxelles griffon chihuahua afangaro amidy
jack russell rat terrier mifangaro
miteraka alika manomboka amin'ny o